Qurbo-joogga SL ee wadamada khaliijka oo madaxweynaha uga digay u saxeexida heshiisyo shidaal baadhiseed shirkadaha sharciyadooda aan la hubin oo xafiisyo uga furan yihiin dalalkan | WWW.SOMALILAND.NO
Qurbo-joogga SL ee wadamada khaliijka oo madaxweynaha uga digay u saxeexida heshiisyo shidaal baadhiseed shirkadaha sharciyadooda aan la hubin oo xafiisyo uga furan yihiin dalalkan
Posted on Febraayo 19, 2008 by Abdirisak Fadal
Hargeysa:- Qaar ka mid ah qurbo jooga ku nool dalalka Khaliijka, ayaa Madaxweynaha Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin uga digay inuu ku deg dego heshiis uu la saxeexdo shirkado ajaanib ah oo baadha shidaalka iyo macdanta.
Qurbo joogaas oo iyaga oo ku sugan magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta xalay la soo xidhiidhay Geeska Afrika, waxay sheegeen inay hayaan warar sheegaya in Madaxweyne Rayaale wadanka Imaaraadka Carabta u tagay sidii uu heshiis ula soo geli lahaa shirkad shidaalka iyo macdanta baadha, taas oo la sheegay inay tahay shirkad uu hore heshiis ula galay Madaxweynaha Puntland Cadde Muuse Xirsi, taas oo galaafatay maamulkiisa.
Ma jiraan warar si rasmi ah daboolka uga qaadaya shirkaddaha ay cabsida ka qabaan qurbo jooga Somaliland, waxase la sheegay inay tahay shirkad magaceeda la yidhaahdo Lundi, inkasta oo ay jirana warar kale oo sheegaya inay jirto shirkad kale oo lagu magacaabo Africa Oil. “Shirkadahani waxay bixiyaan lacag horumarin ah oo laga qaato, waana lacagta khalkhalka iyo jaho wareerka siyaasadeed ka dhex abuurtay gudaha maamulka Puntland. Sidaas daraadeed waxaanu Madaxweynaha uga digaynaa inuu ku deg dego heshiis uu shirkadahaas la galo.” Sidaas waxa yidhi qurbo jooga Somaliland ee dalalka Khaliijka oo xalay la soo xidhiidhay Geeska Afrika.
Madaxweyne Rayaale iyo xubno wasiiro ah oo uu hoggaaminayo ayaa habeen hore ka degay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta.
Sida ay Geeska Afrika u xaqiijiyeen ilo xogogaala oo ku dhow dhow weftiga Madaxweyne Rayaale, Raysalwasaare ku xigeenka wadanka Imaaraadka Carabta ahna Madaxweynaha hay’adda RCS ee Imaaraadka Sheekh Hamdan bin Zayed Al Nahyan oo la sheegay inuu yahay masuulka wadanka ku martiqaaday, ayaa Madaxweyne Rayaale iyo weftigiisa shalay u sameeyay qado sharaf. Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay kulankaas qado sharafta ah, laakiin ilahani waxay sheegeen in Madaxweyne Rayaale maanta la kulmi doono madaxda sar sare ee hay’adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta, waxaana la filayaa inuu kala hadlo sidii ay hay’adaasi caawimo uga gaysan lahayd dib u dhiska Somaliland.
Qurbo jooga Somaliland ayaa socdaalka Madaxweyne Rayaale ku tilmaamay mid aan macnihiisu cadayn oo u muuqda qarsoodi, “Annagu Madaxweynaha waanu u tagnay oo soo salaanay, annaga oo metelaynay jaaliyadda Somaliland, ilaa haddana kuma odhan karo socdaalku madaxweynuhu waxaas ayuu ku jihaysanyahay, waana socdaal u muuqda inuu yahay qarsoodi.” Ayay yidhaahdeen xubnahan qurbo jooga ahi.
Waar markii u horaysay ee uu Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin safar ku tago wadamada Khaliijka, oo iyagu aaminsan mabda’a midnimada Somaliweyn.
« Warsaxaafadeed uu soo saaray Guddoomiyaha Siyaasada Xisbiga UDUB Maxaa Inoo Qabsoomay Maxaase Inaga Qabyo ah »